Nayakhabar.com: सलमानसँग रोमान्स गर्न चाहने १९ वर्षीया सायशा को हुन् ?
सलमानसँग रोमान्स गर्न चाहने १९ वर्षीया सायशा को हुन् ?
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री सायशा सहगलले आफ्नो मनपर्ने कलाकार सलमान खान भएको बताएकी छिन् । उनले खानलाई मनपर्ने कलाकार मात्र भनेकी छैनन् सलमानसँगै रोमान्स गर्ने इच्छा समेत व्यक्त गरेकी छिन् ।
सलमानसँग रोमान्स गर्न चाहने अभिनेत्री सायशा अजय देवगणको फिल्म ‘शिवाय’वाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी हुन्। अजय देवगणको चलचित्रबाट बलिउड प्रवेश गरेपनि उनले सलमान धेरै मन पर्ने खुलासा गरेकी हुन् ।
बलिउड अभिनेता सुमित सहगलकी छोरी एवम् दीलिप कुमारकी नातिनी सायशाले सलमानलाई हजुरबाको जन्मदिनको अवसरमा पहिलो पटक भेटेकी थिइन । उनले जब सलमानलाई भेटिन तब सोचिन, ‘म बलिउडमै करिअर बनाउँछु ।’
अजयसँग काम गरे पनि उनले सलमानलाई फोन गरेर सोध्ने गर्छिन्, ‘म त्यो चलचित्रमा काम गरौँ कि नगरौँ रु’ सायशाको सलमानसँग उमेरको दूरी लामो छ । तर, उनी सलमानको प्रशंसा मात्र गर्दिनन् उनीसँग अनस्क्रिनमा रोमान्स गर्न चाहन्छिन् । उनले भारतीय मिडियासँग भनेकी छिन्, ‘सलमान मेरो फेभरेट हुन् । उनी निक्कै सानदार छन् । म उनीसँगै अनस्क्रिन रोमान्समा रमाउन चाहन्छु ।’
अजयसँग फिल्म बनाइरहेकी सायशाले अजयको समेत ताफिर गर्न भने छुटाएकी छैनन् । उनी अजयलाई अनुभवी ठान्छिन् । उनलाई अजयको नयाँ कलाकारलाई माया गर्ने भावना मन पर्छ । उनले अजयको समेत प्रशंसा गर्दै भन्छिन्, ‘अजय देबगण सर्वश्रेष्ठ कलाकार हुन् ।’
उनी अजय प्रतिभाशाली निर्देशक भएको समेत बताउछिन् । भर्खरै १९ वर्ष पुगेकी सायशाले सलमानसँग रोमान्सको प्रतिक्षा मात्र गरेकी छैनन् । उनीसँगै चलचित्र खेल्ने दिन समेत कुरिरहेको बताएकी छिन् ।
आज नेपाल बन्द,देशैभरका शैक्षिक सस्था र कलकारखाना पुरै ठप्प विप्लवका कार्यकर्ताले बानेश्वर र सामाखुसीमा ट्याक्सी जलाए
काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले नयाँ बानेश्वर र सामाखुसीमा ट्याक्सीमाथि आगजनी गरेका छन् । बानेश्वर मिनभवन उकालो नजिक बा १ ज ५१६२...
आकाशबाट खसेको ढुंगाले थिचेर बस ड्राइभरको मृत्यु !
केहिदिन पहिले भारतको तामिलनाडु प्रान्तमा पर्ने वेल्लोर शहरमा एक इन्जिनियरिङ कलेज परिसरमा एक बस ड्राइभरको मृत्यु भयो। आकासबाट ठूलो आवाजसा...
किन दुख्छ कम्मर ?
धेरै मानिस ढाड दुखेर हैरान हुन्छन् । तर, के कारणले दुखेको हो भन्ने कमैलाई मात्र थाहा हुन्छ । विशेषगरी असामान्य अवस्थामा, चोटपटक लागेको अव...